Zavatra nitranga tany ampianarana tamin'izany
Date: 25 mai 2016 - 17:49
Betsaka ny zavatra nahatsikaiky tany ampianarana, indrindra t@ secondaire.
Nena zao d ty tantaraiko @reo ty:
T@ za 5ème a d nasain ny prof malagasinay nanoratra teny @ tableau le bandy akamako, le iz dicté d lery zan manoratra fotsiny. Angamba ef vizaka lery ty ny tableau ko ef ho feno, ny phrase nasaina nosoratan lery faraparany no tena napme d ty : -TSARA HO AN'NY FAHASALAMANA NY RANONA FARY........d mbola misy tohiny lavab io.
Refa namaky ny zavatr nosoratan lery atram voalohany @zay le prof a, d gaga tonga teo @ le oe : NY RANONA FARY ai kay zavatra hafa no voasotry lery teo fa lasa (O) le (A) teo @ teny oe FARY.
Ny mpianatra retra @io ef tsis naateny fa oe bedy b io androany, kanefa le prof tonga d nivanitika b tsis otrizan, avy eo vo tsis nananaina ny tao ampianarana.
Mba tantarao ko nenao e!!!!!!!
Re: Zavatra nitranga tany ampianarana tamin'izany
Date: 25 mai 2016 - 18:43
Ny anay indray teny amin'ny anjery manontolo. Nisy mpampianatra iray izay, tsy mampianatra afa-tsy amin'ny alalan'ny projecteur. Indray andro izy ni-projeté lesona , dia mila sary anaovana application.Akory ny agagana fa nitady tao @ le PC izy dia nisy sary mamoafady be niseho teo. Variana be teo izy dia avy eo vao taitra...
Vao nivoaka izy dia latsaka tanteraka ny iray fianarana....